Ogaden News Agency (ONA) – Eritrea oo Safaaradeedi Dib uga Furatay Adiss Ababa.
Eritrea oo Safaaradeedi Dib uga Furatay Adiss Ababa.
Posted by Wariye Qaran	/ July 16, 2018
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Adiss Ababa ayaa waxay sheegayaan in dowlada Eritrea maanta dib ufurtay safaaradeedii ay ku lahayd magalada Adiss Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya.
Waxaa furitaanka safaarada siwada jir ah xadhiga uga jaray madaxwaynaha wadanka Eritrea Asiyas Afworki iyo raysalwasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed, safaarada Eritrea oo tan iyo 1998 xidhnayd ayaa maanta dib loofuray kadib markuu soo hagaagay xidhiidhka labada wadan u dhaxeeyay.
Madaxwayne Asiyas Afworki oo booqoosho sadex cisho Ah kujoogay Itoobiya ayaa maanta dib ugu laabtay dalkiisa waxaana lasheegayaa in labada hogaamiye ee Itoobiya iyo Eritrea ku heshiiyeen soo afjarida colaaada labada wadan oo ay ugu horayso dhaqan galinta heshiiskii Itoobiya iyo Eritrea ku dhexmaray wadanka Aljeria waxaana shalay labilaabay furitaanka xadka labada wadan iyo in miinooyinkii 20ka sano lagu aasi jiray laga soo saaro.
Dowlada Eritrea ayaa guushan taariikhiga ah ku gaadhay dadaal iyo geesinimo ay kala hortageen taliskii dhul boobka caanka ku ah ee Tigreega waxaana xaqiiq ah Xaqu inuu gulaysan dulmiguna uunsan waarayn waligii.